वैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई सहुलियत व्याजको कर्जा दिएनन्, मापदण्ड पु¥याउने पिडित कर्जा माग्न नआएको वैंकको दाबी | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ५ माघ २०७६, आईतवार ०८:४७
पालुङटार नगरपालिका ५ डुम्रेचौरका प्रताप तामाङ भूकम्प पीडितले पाउने सहुलियत व्याजको कर्जाका लागि गत भदौमा प्रभु वैंकको पालुङटार शाखामा फाइल लिएर गए ।
डेढ महिनासम्म सो वैंकमा धाए । खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका उनका छोराले कम्पनीबाट पाउने तलवी बिबरण वैंकले माग ग¥यो । त्यो जुटाउन नसकेपछि तामाङले रेमिट्यान्स भौचर पेश गरे । त्यति हुँदा पनि उनले कर्जा पाएनन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५को खण्ड ५, दफा १२ को उपदफा २ मा सम्पूर्ण कागजातसहित २१ कार्यदिनभित्र कर्जा प्रबाह गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भए स्पष्ट आधार र कारण सहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर उनलाई वैंकले कर्जाको साँटो जहाँ जानुहुन्छ, जसलाई भन्नुपर्छ, भन्नुस् कर्जा दिदैनौं भनेर जवाफ दियो ।
उनी फेरि गत कात्तिक महिनामा सो फाइल लिएर राष्टिूय वाणिज्य वैंक गोरखा शाखामा गए । वाणिज्य वैंकबाट दुईलाख ऋण स्वीकृत भयो भनेर आश्वासन पाएपछि १० दिनभित्र पैसा तिर्ने प्रतिवद्धता गरी साहुसंग सात टिप ढुंगा ल्याए । दुई महिना पूरा हुँदा पनि कर्जा नपाएपछि साहुले ढुङ्गा उठाएर फिर्ता लगेको तामाङले जानकारी दिए ।
वैंकले अझै फाइल हेडअफिस पठाएको छ प्रोसेस भइरहेको छ मात्र भन्ने गरेको उनले बताए ।
उनले मात्र होइन, गोरखाका बिभिन्न वैंकमा दर्ता भएका ४० वटा फाइल अड्किरहेका पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको २१ दिनभित्र कर्जा प्रबाह गर्न नेपाल राष्टू वैंकले गरेको निर्देशन अवज्ञा गरी कर्जासम्बन्धी फाइल अड्काएर राख्ने गरेको भूकम्प सम्बन्धी कर्जामा सहजीकरण गर्ने संस्था सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सका जिल्ला संयोजक उद्धव सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘नेपाल राष्ट्र वैंकको मिति २०७६ मङ्सीर ११ गते को निर्देशन नम्बर २ को बुँदा नम्बर ३० मा आउँदो असार मसान्तभित्र क वर्गका वैंकहरुले कम्तिमा पाँचसय जना भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा प्रबाह गर्न निर्देशन गरेको छ’ सुवेदीले भने, ‘ख वर्गका वैंकले कम्तिमा दुईसय जनालाई र ग वर्गका वैंकले एकसय जनालाई सहुलियत कर्जा दिनै पर्ने उल्लेख गरेको छ तर गोरखामा वैंकले पिडितहरुलाई कर्जा नदिई झुलाइरहेका छन् ।’ भूकम्प पिडितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाह गर्न सहजताका लागि राष्टिूय वाणिज्य वैँकलाई संस्थाले दुई जना कर्मचारीसमेत उपलब्ध गराएको तर काममा ढिलासुस्ती भइरहेको उनले बताए ।
अहिलेसम्म गोरखामा रहेको राष्टिूय वाणिज्य वैकले एकजनालाई मात्र कर्जा प्रबाह गरेको जनाएको छ । १९ जनाको आवेदन आएकोमा १४ जनाको मात्र स्वीकृत भएको तर प्रक्रियामै रहेको वैंकका सहायक प्रवन्धक सुजन क्याप्छाकी मगरले बताए ।
नवील वैंकले भने नौ जनालाई कर्जा प्रबाह गरेको जनाएको छ । सहुलियत व्याजको कर्जाका लागि हिमालयन वैंकमा चार जनाको आवेदन आएको तर स्वीकृत नभएको सो वैंकले जनाएको छ । त्यस्तै एभरेष्ट वैंकले एकजनालाई मात्र कर्जा उपलब्ध गराएको छ । प्राइम वैंकले चारजनालाई र कृषि विकास वैंकले एकजनालाई सहुलियत व्याजको कर्जा उपलब्ध गराएको जनाएका छन् ।
गोरखामा क वर्गका राष्टिूय वाणिज्य वैंक, नवील वैंक, ग्लोवल आइएमई, हिमालयन, एभरेष्ट, प्रभु, प्राइम, कुमारी, सिद्धार्थ, एनएमबी, मेगा, सिभिल, कृषि विकास वैंक छन् । ख वर्गका साङ्ग्रिला, गण्डकी, कैलास र मुक्तिनाथ विकास वैंक रहेका छन् । तर राष्टिूय वाणिज्य वैंक, नवील, प्राइम, एभरेष्ट र कृषि विकास वैंकबाहेक अरु वैंकले राष्टिूय वाणिज्य वैंकको निर्देशनअनुसारको कर्जा प्रबाह गरेका छैनन् ।
प्रक्रिया पूरा गरी कागजात पेश गर्ने भूकम्प पिडित वैंकमा आवेदन गर्न नआएको ती वैँकका प्रवन्धकहरु बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पु¥याउन सक्ने लाभग्राही नै आएका छैनन्’, साङ्ग्रिला विकास वैंकका प्रवन्धक महेश अधिकारी भन्छन्, ‘दुई चार जना सोधपुछका लागि आएका थिए । हेडक्वाटरमा कुरा राख्यौं तर हामीलाई आन्तरिक निर्देशन नै आएन ।’
जग हालेर दोस्रो किस्ता लिनसमेत नसक्ने गरिबका लागि सहुलियत ब्याजको कर्जा दिने भनेपनि वैंकहरुले आयस्रोतको विवरण पेश गर्न लगाएर पिडितलाई फर्काउने गरेको सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सका संयोजक सुवेदी बताउँछन् ।
गोरखामा ७१ हजार एकसय ६९ जना लाभग्राही रहेकोमा हालसम्म ६७ हजार पाँचसय ७१ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्य ६४ हजार एकसय ८९ जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन् । ६२ हजार एकसय ३४ जनाले दोस्रो किस्ता र ५७ हजार सातसय ८५ जनाले तेस्रो किस्ता लगेको जिमाली कार्यालयले जनाएको छ ।